« JERY STARTIMES » : Hanaparitaka ny Televiziona nomerika manerana ny faritra
Manan-jo hahazo vaovao ny olona rehetra. Efa miroborobo rahateo ny teknôlôjia hikarohana izany. Ho antsika eto Madagasikara dia efa mihamahazo vahana ny fampiasana ny televiziona nomerika. 1er décembre 2017
Amin’izao fotoana izao dia ny 95 isan-jaton’ny tanàna eto amintsika no ahitana ny masoivoho “Startimes” izay tsy mitsahatra hatrany manampy ny Malagasy amin’ny fanomezana vaovao sy ny zava-misy eto an-toerana sy ny any ivelany. Antony nanatanterahan’izy ireo ny fandaharanasa “Jery Startimes” izay entina hamalifaliana ny Malagasy. Ity fandaharan’asa ity izay natomboka teny Analamahitsy tamin’ny herinandro lasa teo ary nitohy teny Ampefiloha.
Hitety ireo boriboritany enina eto an-drenivoitra izany ary any amin’ireo faritra rehetra manerana ny Nosy. Ankoatra izay dia hampilalao ireo olona eny an-dalambe amin’ny alalan’ny fanentanana amin’ny kamiao mitety tanàna izay hahazoana loka ny orinasa. Fandaharana maro isan-karazany, toy ny horonan-tsary sy sary miteny ary fanadihadiana no atolotry ny orinasa, hoy ny tompon- andraikitry ny serasera ao amin’ny orinasa “Startimes”, Ramaroson Iarilanto.
Amin’izao fety mialoha ny faran’ny taona izao dia tolotra maro no omen’ny orinasa ny mpanjifa. Anisan’izany ny fampidirana ny fahitalavitra isan-tokantrano izay efa misy “Décodeur” miaraka aminy. Eo ihany koa ny fandefasan’ny orinasa ny fiadiana ny tompondaka maneran-tany ny klioban’ny Fifa izay manomboka ny 6 desambra ho avy izao raha azon’ny rehetra arahana tsy tapaka amin’ny “Startimes” ny lalao fiadiana ny tompondaka maneran-tany ny baolina kitra.